Ụbọchị My Pet » 7 AFỌ Onye ọ bụla Site New York City aga On
Ọ bụrụ na ị na-New York City na onye gị na, jide n'aka na ị egbughị a nkeji ole na ole na-agụ site na nke a na peeji nke. Ị na-lelee nneme ọbụna ma ọ bụrụ na ị bụ otu na-achọ onye na obodo; agbalị si otu n'ime ndị a n'ihi na ọhụrụ gị ịhụnanya ga-enyere gị aka ike a mmetụta ọma. Ya mere, ebe a bụ asaa ụbọchị onye ọ bụla si New York City-aga (na-agụ ga-aga) na.
1. Ikiri anyanwụ dara si frying Pan
N'ihi na-eto eto na ndị di na nwunye, ebe a na Hudson bụ n'ezie otu n'ime ndị kacha ekpo ọkụ ugbu mkpakọrịta nwoke na nwaanyị aga obodo ugbu a ụlọ. The Pan, nke bụ isi a aba lightship nke 1929, ọkọdọ kpọlitere n'ọnwụ na taa ọ bụ otu n'ime ndị kasị electrifying amaba n'ime mmiri Ogwe ị ga-achọta.
Echiche nke anyanwụ dara n'elu Hudson River bụ n'ezie scintillating na-agbakwụnye na a aka nke romance na ambiance nke mmanya.
2. Wepụta a ihunanya n'ehihie na Brooklyn Botanical Ogige
Ozugbo ị ga-abanye na nke a mepere emepe olulu miri na Atụmanya Heights, ị ga-enwe dị ka ọ bụrụ na ị na-kilomita si na na na naa nke obodo.
The Brooklyn Botanical Ogige nwere ezu eke akụ na-gị na onye gị na aku ruo ọtụtụ awa; dị ka ọmụmaatụ, Native Flora Ogige, na Cranford Rose Ogige, na Shakespeare Ogige na ndị ọzọ. Otú ọ dị, ihe ị ga-amasị ọtụtụ banyere bụ ebe ngụgụ obi gị ọgụ na mgba ga-esi na ọtụtụ n'akụkụ ndị ọzọ nke obodo.
3. A na-eme njem na-flushing nri malls
The nri malls na flushing, New York City na-ama maka na-eje ozi na-atọ ụtọ Cantonese na asụsụ Mandarin efere.
Nke a ga-abụ a zuru okè ụbọchị n'ihi na ndị niile bonafide foodies. Ndị mmadụ n'otu n'otu na àgwà nke ikenye oyiyi nke ọ bụla nri ha nwere na-elekọta mmadụ na netwọk ga-ahụkwa nke a mkpakọrịta nwoke na nwaanyị echiche nnọọ enthralling.
4. Njem azụ n'oge:
N'ileghachi anya na-emefu ụfọdụ oké oge gị na onye òtù ọlụlụ n'oge ọdịda? Kwadebe a ụbọchị na-eme n'ụlọ ochie obodo nke Richmond Town.
5. A gara Central Park
Central Park bụ oké ebe na-aga na onye gị na n'oge okpomọkụ. Ọ bụ eziokwu na summers na New York City na-emekarị taxingly iru mmiri; Otú ọ dị, na ihu igwe na-aghọ obi ụtọ mgbe anyanwụ na-aga ala. N'ihi ya, n'oge okpomọkụ, ị nwere ike mfe atụmatụ mgbede ụbọchị na-emeghe.
Central Park, na ndị niile ntụrụndụ nhọrọ o nwere, N'ezie a akwa ebe gaa na otu ụbọchị.
6. Nwere a ochi na The iheukwu ụlọ
Na-eme atụmatụ ịga na onye gị na na a Tuesday n'abalị? Ị pụrụ ịtụle ịkwụsị site The iheukwu ụlọ. Kwa Tuesday, na burlesque mgbakọ nkebi Seth Herzog si ntochi show. Na ya, Herzog na-emekarị nwere ya ịtụnanya na Ugbu mama m.
7. Enwe a nkiri ụbọchị Bryant Park
Nke a ga-abụ a zuru okè ụbọchị nkiri buffs na ndị niile na Fans nke ochie; ma, echeta a nkiri ụbọchị Bryant Park kwesịrị mgbe a ga zubere na ụbọchị Mọnde.
Kwa Monday, mgbe anyanwụ dara, ihe n'èzí nkiri e gosiri na nke a naanị jisiri ọha ogige. Ụfọdụ snacks, a kalama mmanya na a blanket na-unu abụọ mma ga-ezuru nwere ihunanya nkiri ụbọchị.
Ị nwere ike gị na onye òtù ọlụlụ kasị ihunanya na saịtị na New York City, ma na-eme ka ụbọchị a ọma otu, ị chọrọ isi mgwa na nke ahụ bụ ịhụnanya.